အွန်လိုင်းကနေ movie (or) mvsic (or) files တွေကို sharing လုပ်ပြီးအွန်လိုင်းကနေ ငွေရှာလို့ရမယ့် ၀က်ဆိုဒ် ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Facebook ဆိုင်ရာ » အွန်လိုင်းကနေ movie (or) mvsic (or) files တွေကို sharing လုပ်ပြီးအွန်လိုင်းကနေ ငွေရှာလို့ရမယ့် ၀က်ဆိုဒ်
အွန်လိုင်းကနေ movie (or) mvsic (or) files တွေကို sharing လုပ်ပြီးအွန်လိုင်းကနေ ငွေရှာလို့ရမယ့် ၀က်ဆိုဒ်
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ အွန်လိုင်းကနေ movie (or) mvsic (or) files တွေကို sharing လုပ်ပြီးအွန်လိုင်းကနေ
ငွေရှာလို့ရမယ့် ၀က်ဆိုဒ်လေးတွေ မျှဝေချင်ပါတယ်။ ၀က်ဆိုဒ်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိမှာ အကောင့်တစ်ခု
ရှိရုံနဲ့ movie (or) mvsic (or) files တွေကို Upload ပြီးငွေရှာလို့ရမယ့်အခွင့်အရေးပါ။ မိမိတင်လိုက်
တဲ့ movie (or) mvsic (or) files တွေကို အခြားလူက download လုပ်တာနဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ပေါ်
မူတည်ပြီး money ရမယ့်အစီအစဉ်လေးပါ။ အောက်မှာအကောင်းဆုံးဝက်ဆိုဒ်5ခုကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ၀င်ပြီးကလိကြည့်လိုက်ပါ။ ကျန်တာကိုတော့မိမိ ညာဏ်ရှိသလိုအသုံးချပါ။
Don't worry today i discuss some best file sharing websites which help you to make easy money online.Just log into one of these websites and share your files.When someone download your upload files these websites pay you.
You will make the most money from your files with ShareCash, period. Get paid around $1 every time someone downloads one of your files.With onlya$10 cashout minimum, you can get paid through PayPal, Payza, Payoneer, Payquicker, Wire Transfer/ACH and Checks.
This is the another website to make money online via file sharing.What the admin of GoUpload says "Others websites pay you $10 per 1000 downloads.But GoUpload.com gives you $200 per 15000 downloads".Their minimum rate per download is $0.20 to $15.
Universal Upload isafile sharing network where people all around the world can store,share files,docouments,eBooks,Music, and files globbaly in their personal interests and get paid for it in process.
DollarUpload is the best site to monetize your web content with. You get paid money to protect any web content you own. You can lock parts of your website or upload files and links that will be protected.